अक्सिजनमा चरम नाफा : खरिद मूल्य ४००, बिक्री ९१५ – BUSINESSPANA.COM
नेपालगन्ज : प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँमा किनेको अक्सिजनलाई कतिसम्ममा बेच्न पाइन्छ ? कालोजारसम्बन्धी ऐनले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिन्छ। त्यस आधारमा बढीमा ४ सय ८० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने हो।
तर, नेपालगञ्जको जयेश ट्रेडिङ कन्सर्नले भेरी अस्पताललाई लामो समयदेखि ९ सय १५ रुपैयाँमा बेच्दै आइरहेको छ। यो महामारीमा प्राणवायु अक्सिजनकै कालोबजारी गरेर उसले सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाइरहेको छ।
जयेशका सञ्चालक राजीव तेलंगाका अनुसार उक्त कम्पनीले नेपालगन्ज परसपुरस्थित एचओ अक्सिजन ग्यासबाट प्रतिसिलिन्डर ४ सयमा खरिद गर्छ। त्यही अक्सिजन भेरी अस्पताललाई ९ सय १५ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको तेलंगाले खुलस्त बताए।
भेरी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा १५/२० जना बिरामीले आफैं अक्सिजन सिलिण्डरको व्यवस्था गरेका छन्। अस्पतालका प्रमुख डा. थापा पाइप लाइनबाट अक्सिजन दिने व्यवस्था भए पनि बिरामीले सिलिण्डर राख्ने गरेको बताउँछन्।
Sorce:- annapurna post
Previous: कर्जा थपीयो, व्यबसाय ठप्प : तिर्न नसक्दा कालो सूचिमा सूचिकृत !
Next: ग्याष्ट्रिक हुने मानिसले के खाने के नखाने ? यस्ता खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्